सलमानलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने एक संदिग्धलाई सोधपुछ गर्दै प्रहरी ! - Laltin Media
Home»ग्ल्यामर»सलमानलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने एक संदिग्धलाई सोधपुछ गर्दै प्रहरी !
सलमानलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने एक संदिग्धलाई सोधपुछ गर्दै प्रहरी !
सलमान खानलाई ज्यान मार्ने धम्कीपछि मुम्बई प्रहरीले सतर्कता बढाएको छ । सोमबार मुम्बई प्रहरीको टिम सलमान खानको घर ग्यालेक्सी अपार्टमेन्टमा पुगेको थियो । सलमान खानलाई आइतबार सिद्धु मुसेवालाकै शैलीमा हत्या गरिदिने धम्की दिइएको थियो ।
धम्कीयुक्त पत्रमा लेखिएको थियो, “सलिम खान, सलमान खान छिट्टै तिमीहरुले हाल पनि सिद्धु मुसेवालाको झैँ हुनेछ ।” यसबारे मुम्बईको बान्द्रा प्रहरीले एफआइआर दर्ता गरेको थियो ।
एक रिपोर्ट अनुसार, धम्की नोटमा lb ‘र’ gb ‘उल्लेख गरिएको थियो। पुलिसले लवरेन्स बिश्नोईलाई संदिग्ध मानेर प्रश्न गरिरहेको छ । अर्को शंकास्पद व्यक्ति गोल्डी ब्रार हो जसले ग्यांग प्रतिस्पर्धाको परिणामस्वरूप सिद्धु मोसवालालाई मारेको जिम्मेवारी लिएको छ।
बिश्नोईले सन् २०१८ पनि सलमान खानलाई मार्ने धम्की दिएको बताइएको छ। रेडी फिल्मको सेटमा सलमानलाई मार्न असफल भएको उनले बताएका थिए । त्यस कामलाई अन्जाम दिन उनले एक राइफल खरिद गरेका थिए जुन पुलिसले पक्राउ गर्न सफल भएको थियो ।